ညီလင်းသစ်: ဖြတ်သန်းမိရာ တစ်နေ့တာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 7.1.12
ဟားဟား ကိုညီလင်းပို့စ်ရဲ့ အဆုံးသတ်ကို ဖတ်ပြီး တယောက်ထဲ ကြိတ်ရယ်နေရတယ်။ အော်မရယ်ရဲဘူး ဦးရီးတော် ကြားသွားမှာစိုးလို့။ :))
ကိုညီလင်း မုန့်ဟင်းခါးကို စားချင်ပုံက တော်တော် အသေးစိတ်တယ်နော်။ ကျမလဲ မုန့်ဟင်းခါးကို ငဖယ် ၂ ပြား၊ ငှက်ပျောအူ ၃ ဖတ်၊ နံနံပင် ၄ မျှင်၊ အကြော် ၅ ဖတ်၊ ငဂုတ်သီးမှုန့် ၆ မှုန့် လောက်နဲ့ မနက်တိုင်း စားချင်လိုက်တာ။
ချဉ်ပေါင်ကြော် စားချင်တာ တူနေပြီ ကိုညီရေ..မစားရတာ ၁နှစ်ရှိတော့မယ်..
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီ ကွန်မန့်ရေးသူနဲ့ ကျနော် သဘောတူတယ်၊ ရေချိုးတာ၊ အိမ်သာတက်တာ တွေက ဘယ်သူမှ မရေးကြဘူးနော်၊ တကယ်ဆို ဒါတွေက တကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိပ်ဆုံးကကို အရေးတကြီး ရှိနေတဲ့ အကြောင်းချင်းရာတွေ မဟုတ်လား..၊းD
ကဲ..ဒါဆို ချဉ်ပေါင်ကြော် ပရိတ်သတ် တစ်ယောက် တိုးလာပြန်ပြီပေါ့..၊း)
မနက်စာမုန့် ဟင်းခါးငှက်ပျောအူနဲ့ စားချင်တာတော့တူနေပြီ။ ကျမလည်းမုန့် ဖတ်ကုိုမျှင်မျှင်လေးမှကြိုက်တယ်။
သက်တန့်ပေါ်မှာ၊တစ်ယောက်က တိမ်ပေါ်မှာ မန်မန်စား
" ကျနော့်ကို ဖြစ်လာစေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ အမေ...၊ ကျနော်က ဖြစ်စေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ သား..." အဲဒီစာစုလေးကတော့ ဖတ်ရတာကြည်နူးရသ
ရဲ့ ဘဝနဲ့မေတ္တာကိုလည်း ဒီပို့စ်လေးထဲမှာ ဖျက်ကနဲ
မြင်လိုက်ရတယ်.....။ပြီး လူပျိုကြီးတွေကိုလည်း သူတို့
ဘဝကို နဲနဲပြန်သုံးသတ်ဖို့လိုလာပြီလို့ အချက်ပေး
ဆိုပြီး တစ်ယောက်မှ သွားတိုက်တာ၊မျက်နှာသစ်တာ
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေး အမြန်ဆုံး ဖြစ်မြောက်သွားပါစေဗျာ၊ ပုံတွေကြည့်ချင်လို့ပါ :D
ဒါမှ လွင်ပြင်တို့လဲ ဓါတ်ပုံကြည့်ရမှာ
ဒီမှာလည်းအမြဲတော့မစားရပေမယ့် ချဉ်ပေါင်ကြိုက်သူဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
ချဉ်ပေါင်ကြော် ပရိသတ်တွေ များတာပဲနော် အကို ..:):) ဟုတ်တယ်အကို ဒီမှာလဲ တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေ သူတို့လူမျိုးတွေ စုပြီး ဈေးဝယ်တာမျိုး အပြင်စုသွားကြတာမျိုး မြင်တော့ မြန်မာကို လွမ်းထှာ...ညီမလေးတော့ တစ်ယောက်ထည်းနေနေတာကို ခုထိ နေသားမကျသေးသလိုပဲ ...:(
အဲ့ဒီအဖြေလေး နှစ်ခြိုက်လိုက်တာ . ... အစ်ကိုနဲ့ ညနေစာ တစ်ခါလောက် တူတူစားပြီး စကားတွေ ပြောချင်သေးတယ်ဗျ တစ်နေ့ နေ့ပေါ့နော့်း)))
ဟုတ်တယ် အစ်ကိုရေ... ဒီဘက်ခောတ် ကလေးတွေ မလွယ်ဘူး... ကိုယ်က သူတို့ ကို ဆုံးမချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ အနေမှန်မှ နို့ မို့ သူတို့ က ပြန်ပြန်ထောက်တယ်... မလွယ်တာမှ တကယ်မလွယ်တာ အစ်ကိုရေ...
တနေ့တာလေးတွေ အပြန်အလှန်ဖတ်ရတာ တမျိုးလေးပဲ။ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေလည်း ဖြစ်ခွင့်ရပါစေနော်အကို။
ကိုညီလင်းသစ်ပြောမှပဲ ချဉ်ပေါင်ကြော်စားချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ် ...။ ဟုတ်တယ် မစားဖြစ်တာကြာပီဗျ....။ တိမ်တွေကိုကြိုက်သူအချင်းချင်း ကညိမ်းတို့ ကိုညီလင်းသစ်တို့ရဲ့ ထမင်းဝိုင်းကိုလာလုစားမှထင်ရဲ့...။
" ကျနော့်ကို ဖြစ်လာစေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ အမေ...၊ ကျနော်က ဖြစ်စေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ သား..." ကြည်နူးပီတိဖြစ်စရာစာသားလေးပဲ...။ မေတ္တာစေတာနာတွေစိမ့်ဝင်နေတာမျိုးမြင်နေရတယ်...။
မအိုင်အိုရာလည်း မုန့်ဖတ်ကို ဂရုစိုက်တတ်သူကိုး..၊း)
အဲဒါဆိုရင်တော့ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်ပြီး ထမင်းစားမယ်-လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်ဗျ..ဟားဟား၊
သိပ်တော့ မမြန်နိုင်ဘူးဗျ၊ အနီးဆုံးရက်က ဧပြီ ၂၁ မှာမှ ရွာမှာ ..၊း)
ကြယ်မိုးရွာသည့်တိုင် ကျနော်ကလည်း ရိုက်နိုင်ဦးမှ ဆိုတော့ လောလောဆယ် ‘ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာ’ လို့ ပြောရမှာပဲဗျ..၊း)
လင်နဲ့မယား အတွေးတွေ၊ ရှုမြင်ပုံတွေ တူနေတယ် ပေါ့လေ..၊း)
ဟုတ်တယ်နော်၊ ချဉ်ပေါင်ကြိုက်သူတွေ အများကြီးပဲ၊ Export လုပ်ရင်တောင် ချမ်းသာမလား မသိ...၊း)
ကြာလာတော့လည်း ဒီလိုပဲ နေသားကျသွားမှာပါ ညီမရေ..၊
ဟား.. ညီမရဲ့ ညနေခင်းတွေက သွားရည်တောက်တောက် ကျမယ့် ညနေခင်းတွေ ပဲဗျ၊း)
ကျနော်ကလည်း ညီတို့ဆီက ဈေးချိုသလောက် အရသာ ရှိလှတဲ့ ထိုင်းစာတွေကို ‘ကျနော် ဟိုးအရင်တုန်းက မောင်မျိုးပါ’ လို့ ကြေညာ ထားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ယောက်နဲ့ အတူ သုံးဆောင် ချင်ပါတယ်ဗျာ..၊း)
ဒီဆရာလေးတွေနဲ့ မလွယ်တာတော့ တကယ့်ကို မလွယ်တာဗျို့...၊
စားလို့ရတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတုန်းဆိုရင် အဝသာ စားထားဗျို့...၊း)
ကျနော်လည်း ကင်မရာပဲဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ကင်မရာအိုလေး ကို မပစ်ရက်သေး ဟီး (အသစ် မ၀ယ်နိုင်သေးလို့ ) :P
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ တစ်နေ့တာကိုဖတ်ပြီး တွေးစရာလေးတွေတစ်ချို့ ခံစားချက်လေးတွေတစ်ချို့ လွမ်းစရာလေးတွေတစ်ချို့ စုံနေအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ “ကျနော့်ကို ဖြစ်လာစေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ အမေ...၊ ကျနော်က ဖြစ်စေတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင်တော့ သား...၊” ဒီစာသားလေးက ရင်ကိုထိတယ်။ ငယ်ငယ်က အထက်တန်းကျောင်းတွေက ကလေးတွေကြားမှာ ခေတ်စားခဲ့ဖူးတဲ့ အော်တိုစာအုပ် ယဉ်ကျေးမှုလေးကိုလဲ ပြန်လွမ်းသွားတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကြားက တဂ်ပို့စ်လေးတွေကို ဖတ်ရတာ တခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့သူတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ နွေးထွေးတဲ့ ခင်မင်မှုတွေ ပိုလာသလို စိတ်ချင်းလဲ ပိုရင်းနှီးမှုရှိလာတာတော့ အမှန်ပဲနော်။ (နောက်တခါ မုန့်ဟင်းခါးစားရင်တော့ ပန်းကန်ထဲ ငှက်ပျောအူ ဘယ်နှဖတ်ထည့်စားမိလဲ ရေကြည့်ထားအုံးမှ.. :D)
ကိုညီလင်းရေးတဲ့ တစ်နေ့တာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ တစ်နေ့တာပါဘဲ..
လူငယ်တွေ ရေးတာဖတ်လာတာ များတော့ သားတစ်ယောက် ဖခင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ရေးမလဲလို့ စိတ်ဝင်တစားပိုသတိထားပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ထင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ သားလေးကို ဦးစားပေးထားတာလေးတွေကို ချစ်စဖွယ်တွေ့ရတယ်
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါရဲ့ရှင်.
ဘလော့တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်လာပြီးမှ အိပ်ချိန်ပိုနည်းလာတယ် ဆိုတာ မှန်လိုက်သမှနော်. တစ်ချို့ညတွေများ အိပ်တောင် မအိပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး.. ဒီဘလော့ဒုက္ခလည်း မသေးဘူးနော်.း)
တစ်နေ့တာ အော်တိုဂရပ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာ။ သားသားအတွက် အချိန်ပေးတာ သဘောကျတယ်။ ချစ်ချစ်အတွက်လည်း တစ်နေ့တာထဲပါဘူး။ ချွန်တွန်းလုပ်လိုက်ပြီ။ ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖတ်ရင်း ဗိုက်ခေါက်ဆွဲခံရအောင်... :)
မကြိုက်ဘူး လည်ချောင်းယားလို့း)အိုးဘဲဥတော့ကြိုက်ပါ့
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို ဖတ်ရတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးမိတယ်။ အကြိုက်ချင်း တူမိတာကိုး :)